महिनावारी किन नियमित हुदैन? ध्यान दिनुहोस यी कुरा, नत्र हुनसक्छ बाझोपन! - Bigul News
महिनावारी किन नियमित हुदैन? ध्यान दिनुहोस यी कुरा, नत्र हुनसक्छ बाझोपन!
असोज ०३, २०७७ SLPA
पोलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोमलाई सामान्य भाषामा (पिसीओएस ) भनिन्छ । अर्थात् यसलाईपोलिसिस्टिक ओवरी डिसअर्डर (PCOD) पनि भनिन्छ। केहि वर्षदेखि महिलाहरुमा यस्ता समस्या बढिरहेको छ। सेप्टेम्बर महिनालाई पीसीओस जागरूकताको रूपमा मनाईन्छ। पीसीओस एक ग-म्भीर हार्मोनल समस्या हो जुन मेटाबलिक र प्रजनन सम्बन्धि समस्या आउँछ। पीसीओस समस्या थुप्रै महिलाहरुमा पाईन्छ तर यस बारेमा कमै मान्छेलाई थाहा छ।
के हो पिसीओएस?
पीसीओसमा महिलाको शरीरमा सामान्य भन्दा धेरै हार्मोन्स बन्छ। हार्मोन असंतुलनको कारण एक ओभुलेशन हुन्छ जसकारण पीरियड्स नियमित हुदैन। पछि प्रेग्नेंसीमा पनि समस्या आउँछ। २० देखि ३० वर्षको महिलामा यस्तो समस्या आउँछ। पीसीओसले ओवरीमा असर पर्छ जसकारण महिलाको प्रजनन अंग प्रभावित हुन्छ। प्रजनन अंगले नै शरीरमा एस्‍ट्रोजन र प्रोजेस्‍टेरोन हार्मोन बनाउछ र पीरियड्सलाई संतुलित राख्छ।
मेयो क्लिनिकको अनुसार पीसीओएसको लक्षण पहिला मासिक धर्मको समयको आसपास विकसित हुन्छ। कहिले-काहिँ वजन बढ्नुको कारण पनि हुन सक्छ। पीसीओएसको लक्षण हरेक महिलामा अलगअलग हुन्छ।
अनियमित वा लामो समयसम्म दुखाइको साथ महिनावारी हुनु सामान्य संकेत हुन सक्छ। जस्तै वर्षमा ९ पिरियडभन्दा कम हुनु, दुई पिरियडको बीचमा ३५ दिनभन्दा बढी फरक र असामान्य रुपमा धेरै पिरियड हुनु।
महिलामा थुप्रै पटक हार्मोनको असन्तुलन (पुरुष वाला हार्मोन धेरै हुनु) को कारण अनुहार, शरीरमा अनावश्यक कपाल आउनु र कहिलेकाहीँ अनुहारमा डन्डिफोर पनि आउँछ।
यस स्थितिमा ओवरी यानी अंडाशय बढ्न लाग्छ जसकारण एगको चारै तर्फ फलिकलको संख्या बढ्न थाल्छ र ओवरीले सही तरिकाले काम गर्न सक्दैन। मोटो मान्छेमा यो समस्या धेरै हुन्छ।
शरीरमा इंसुलिन नबन्नु:
इंसुलिन एक यस्तो हार्मोन हो जुन शरीरमा पाचन तन्त्रलाई खानामा मिल्ने सुगर बनाउन मदत्त गर्छ। पिसीओएस हुदा इंसुलिन बन्न बन्द हुन्छ, जसकारण शरीरमा अतिरिक्त दबाव पर्छ। यस दवाबको कारण ओवरीले पुरुषमा हुने हार्मोंस निकाल्न सुरु गर्छ।
पिसीओएस कुनै नयाँ नया सिंड्रोम हैन। यदि परिवारमा कसैलाई मोटोपन र डायबिटीजको समस्या छ भने त्यस्तो व्यक्तिमा पिसीओएस हुने सम्भावना बढ्छ।
पीसीओएसको कारण हुने मुख्य समस्या बाझोपन हो। थुप्रै पटक मिसक्यारिएज र समयपूर्व चचा जन्मने जस्ता म्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्छ। यस बाहेक महिलामा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्ट्रोक, मुटु सम्बन्धि बिरामी , गर्भाशयको क्यान्सर र शरीरमा हुने परिवर्तनको कारण डिप्रेशनको समस्या आउँछ।
घरमै गर्नुहोस् उपचार:
जीवनशैलीमा केहि परिवर्तन गर्दा पनि यस समस्याबाट बच्न सकिन्छ। पिसीओएसलाई नियंत्रण राख्नको लागि कार्बोहाइड्रेट डाइट लिनु, वजन कम गर्ने र दिनमा कम से कम ३० मिनेटसम्म एक्सरसाइज गर्नुपर्दछ । वजन कम गर्नाले डायबिटीज र मुटु रोगको ख-तरा कम हुन्छ र कोलेस्ट्रलको स्तर पनि सही हुन्छ।
पिसीओएसको मेडिकल ट्रीटमेंट पनि गर्न सक्छ। यस केसमा डाक्टरले हार्मोनलाई सन्तुलित गर्नको लागि औषधि दिन्छ र यसै कारण पीरियड्स नियमित हुन्छ। इनफर्टिलिटीको समस्या टाढा गर्नको लागी ओवरी सर्जरी पनि गरिन्छ।
प्रकाशित : शनिबार, असोज ०३, २०७७१२:३२
के तपाईलाई टाउको धेरै नै दुख्छ? त्यसो भए घरमै अपनाउनुहोस यी ४ उपाय!
२ हप्ता अगाडि SLPA
सुहानामाथि रंगभेदको टिप्पणी भएपछि भावुक हुदै गौरीले लेखिन यस्तो पोस्ट!
अक्टूबर महिना यी ३ राशिको लागि हुनेछ विशेष र ३ राशि हुनुपर्नेछ सावधान,!